एउटा अनौठो आत्महत्या : उदास र खिन्न बनाएको घटना - Goraksha Online
तुलसीपुर, १८ असार । तुलसीपुरमा बुधवार रातिको एउटा आत्महत्या जसले समाजलाई उदास, आक्रोशित र खिन्न बनाएको छ । जसले सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको उपभोगलाई नै चुनौती थपिदिएको छ । तुलसीपुरकी एक युवतीले फेसबुकमा लाइभ आएर झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ रानीजरुवा निवासी २३ बर्षीया एलिसा गौतमले बिहीवार विहान १ बजेर २५ मिनेटमा फेसबुक लाइभमा आई झुण्डिएर आत्महत्या गरेको घटनाको भिडिओ भाइरल भएको छ । बालबालिकादेखि समाजका जुनसुकै तह र तप्काका नागरिकहरुलाई यसले एउटा अनुत्तरित प्रश्न पनि ल्याइदिएको छ । जुन भिडिओले कसैलाई आत्महत्या गर्न पनि सिकाएको छ ।
‘यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? मृतकले फेसबुक लाइभ गरेको मोबाइलको लक खोल्न पनि सकिएको छैन’, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी शिवबहादुर सिंहले भने । तुलसीपुरका सबै मोबाइल पसलमा फोनको लक खोल्ने प्रयास गरिए पनि सकिएको छैन । मोवाइलको प्याटर्न चेन्ज गरे सो मोबाइलमा भएका सबै डाटा हराउनसक्ने मोवाइल प्राविधिकहरुले बताएका छन् । सम्भवतः प्रहरीले उनले प्रयोग गरेको मोबाइलको लक खुलाउन र डाटाहरु सुरक्षितरुपमा रिसिभ गर्नका लागि काठमाडौंस्थित फरेन्सिक ल्यावरोटरीमा पठाइने छ ।
‘उनको सम्पर्कमा रहेका साथीभाइलाई बोलाएर आत्महत्याका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख सिंहले भने । मृतकका आफन्तहरु पनि यहाँ नभएकाले घटनाका विषयमा बुझ्न थप कठिनाई भएको पनि प्रहरीको निष्कर्ष छ । मृतकले आत्महत्या गरेको भिडियो युट्युवमा छ । जसलाई हजारौंले हेरिरहेका छन् । सम्भवतः यो नेपालमै पहिलो घटना भएको पनि बताइएको छ ।
फेसबुक लाइभमा आउँदा एलिसाले होत जोडेर कान समातेर लाइट अफ गरेको र फेरि अन गरी सलको पासो लगाई फ्यानमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको जानकारी प्रहरीले दिएको छ । रानीजरुवास्थित माइती घरमा एसिला एक्लै बस्दै आएकी थिइन् । उनका आमा–बुवा इण्डियामा बस्दै आएको तथा पहिला पतिसँग उनको सम्बन्धबिच्छेद भइसकेको डिएसी सिंहले बताए ।
त्यसैले उनकी छोरी पनि पूर्व पतिसँगै बस्दै आएको डिएसपी सिंहले जानकारी दिए । ‘तुलसीपुरकै एक युवतीले लाइभमा आएर आत्महत्या गर्दै गरेको भन्ने पहिलोपटक चितवनबाट एक पत्रकारले १ बजेर २७ मिनेटमा खबर गरेका थिए’, डिएसपी सिंहले भने– ‘तपाँईको एरियामा एकजना लेडिजले फेसबुक लाइभमा आएर आत्महत्या गर्दैछिन्, सक्नुहुन्छ भने उसलाई बचाउनुहोस भन्ने उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो ।’ त्यसपछि डिएसपी सिंहले प्रहरी निरीक्षक झलकप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा १२ जनाको प्रहरी टोली साइरन बजाउँदै सम्भावित क्षेत्रमा खटाएको जानकारी दिए ।
त्यो बीचमा उनले साइबर क्राइमसँग उक्त विषयमा कुरा गरे । साइबर क्राइममा कार्यरत मानिसहरुले गुगलबाट तानेर एउटा नम्वर दिए । त्यो नम्बरमा डिएसपीले फोन गरे । ती व्यक्तिले घटनास्थल रानीजरुवा क्षेत्र भएको जानकारी दिए । अनि बल्ल प्रहरी त्यहाँ पुग्न सफल भयो । प्रहरीले बिहानको साढे ३ बजे मात्रै एलिसा बस्ने घर फेला पार्न सफल भयो । युवतीले आत्महत्या गर्नुको कारण भने खुली नसेकेको प्रहरीले बताएको छ ।
यसैबीच प्रहरीले उनको आत्महत्याको भिडियो फेसबुकबाट हटाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाइसकेको जानकारी दिएको छ ।
पूर्ण वहुमतको सरकार ढालेर ढल्दैन